भारतलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : "सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते" ? - नेपाल घटना
भारतलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : “सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते” ?
प्रकाशित : ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १४:२७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक भारतसामू लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा सत्यको जित हुन्छ कि हुन्न भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय अब ओझेलमा पर्न नदिने बताए । ‘यसको निष्कर्ष निकालिन्छ । हाम्रो भू-भाग फिर्ता लिइछाड्छौं’ उनले भने ।
तर भूमि फिर्ता सजिलो छैन भन्ने देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भारतको एउटा प्रतिक चिन्ह छ भारत भनेर चिनिने । अशोकाले स्थापना गरेको चार मुखे सिंह । त्यसको मुनी सत्यमेव जयदेव लेखेको छ । म सोध्ने वाला सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?’
‘सत्मेव जयते’ भारतको चिन्हमुनी लेखिएको भए पनि विश्वासचाहिँँ आफूले गर्ने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘म सोध्नेछु भारतलाई– सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते ?
सत्यमेव जयतेको नेपालीमा अर्थ हुन्छ सत्य को नै विजय हुनेछ, असत्यको होइन । सत्यमेव जयते भन्ने आदर्श वाक्य मुण्डकोपनिषद्को ३.१.६ को मन्त्र हो । जसमा भनिएको छ स्